Freshcaller: Virtual Runhare Sisitimu ye Remote Kutengesa Matimu | Martech Zone
Chipiri, Zvita 1, 2020 Chipiri, Zvita 1, 2020 Douglas Karr
Nepo zvikwata zvekutengesa zviri kure zvakakura mukuzivikanwa nemakambani, denda uye kukiya kwakachinjisa timu yazvino yekutengesa kuti ishande kubva kumba. Nepo kupera kwekukiya kunogona kuchinjisa vamwe kuenda kuzvikwata kuti vadzokere kuhofisi, ini handina chokwadi chekuti ruzhinji rwemakambani runoda kufamba ikoko. Mari isingakoshi yedhorobha rekutengesa hofisi haingazove nemubhadharo pane mari yayaimboita… kunyanya izvozvi makambani akasununguka nevashandi vanoshanda kubva kumba.
Nepo chimwe chinhu chakakwira mukukura yaive musangano wevhidhiyo, chimwe chinodikanwa kumatimu ekutengesa ari kure anga ari ekudaidzira masisitimu. Zvikwata zvekutengesa zviri kure zvinoda mashoma ekufona maficha kana uchishanda kubva kumba:
Fonera Masking - Iko kugona kwekufona nekuburitsa nhare yekufonera inomiririra kambani, kwete iyo yakavanzika nhamba yemumiriri wekutengesa.
Dana Monitoring - Iko kugona kwevatengesi makochi ekuteerera kunzira dzinobuda uye kupa nhungamiro kune vamiririri vekutengesa kuti vavandudze misangano yavo yekutengesa.
Fonera Kushuma - Iko kugona kwehutungamiriri hwekutengesa kuteedzera kubuda kweruzhinji vhoriyamu kuona kuti vamiriri vekutengesa vanobudirira.
Freshcaller: Runhare Sisitimu Yezvekutengesa Matimu
Nyowani nyowani iri chaiyo foni sisitimu iyo yakavakirwa zvikwata zvekutengesa. Haingori chete nezvose zvakakosha zviri pamusoro, asi zvakare yakasimba foni sisitimu iyo yakakwana kune kure kutengesa zvikwata izvo zvinotora zvinowanda uye zvinoita kubuda kwekutengesa mafoni. Uye Freshcaller inogona kumhanyisa kubva kune yako yekutengesa reps 'mbozhanhare.
Nyowani nyowani ine zvimwe zvinowedzeredza zvinotyaira kunyatsoita basa rako rekutengesa zvikwata:
Nhamba Kutakura uye Kuwana - Tumira nhamba yako yazvino kuFreshcaller kana kuwedzera yemuno, yepasirese, yemahara, kana nhamba dzisina maturo kubhizinesi rako.
Fonera Masking - Ipa mafoni ako kubata wega nekuvhara nhamba yako yebhizinesi neako wega nhamba.
Akawanda manhamba - Govera reps yako nenhamba munyika yega yega dzavari kunongedza kupa kuvimbika kune kwavo kufona.
Voicemail Kudonha - Wedzera pre-yakanyorwa meseji pakadzvanya bhatani kuvoicemail inbox yetarisiro aisakwanisa kuenda kufona.
Kuongorora & barging - Teerera kune inoenderera mberi hurukuro uye ubatanidze kufona kuti upe maoko-pane rubatsiro kune rep rep ari kunetseka kuvhara chibvumirano.
Fonera Kukara - Inoda vamiriri vako vekutengesa kuti vatorese kufona kwese vane chinzvimbo chekufona icho kuitira kuti iwe ugone kuongorora kufona kushanda uye tarisiro nhanho.
Mobile app - Ipa reps vako kugona kutengesa kubva chero nzvimbo basa ravo rinovatora, neiyo Freshcaller app yavanogona kuita uye kutora mafoni uye kugadzira vatungamiriri mukuenda.
Kubatanidzwa Zviito - Gadzira inotungamira kana kunongedza kufona kune iripo lead neiyo Freshcaller-Freshsales kusangana. Ita shuwa kuti kufona kwese kwakapinda mukati meakaundi CRM account.
Nzira Dzinosheedza kuVoicemail - Gadzira yako kwaziso yevoicemail, nzira yapashure-maawa kufona kuvoicemail, kana kuita michina yekudonhedza voicemails.
Set Up Split Bhizinesi Maawa - Shanda nzvimbo yako yekufona zvichibva pane yakatarwa nguva nemazuva anoenderana nebhizinesi rako. Iwe unogona kugara uchigadzirisa paunenge uchiyera.
Chikamu Chekufona neMulti-Chikamu IVR - Gadzira yakazara inoshanduka PBX sisitimu ine hunyanzvi hwekuita nyore kufona kune vamiririri kana zvikwata, pamwe nekukwanisa kusanganisira sarudzo dzekuzvishandira.
Scale Up pamwe Yakagovaniswa Lines - Govera imwe nhamba yefoni kune vakawanda vashandisi, uye pindura inouya mafoni kubva kune chero foni, chero kupi.
Gadzira mazororo uye nzira dzemitemo - Wedzera rakasarudzika runyorwa rwemazororo enhamba dzese dzenhare dzakatengwa mukati mekambani yeFreshcaller kuronga mafoni anouya anotambirwa pazororo rako. Gadzira uye gadzirisa yakasarudzika nzira dzekuronga kubata dzinouya mafoni panguva dzezororo.
Gadza Kumusoro Kwaziso Kwaziso - Shandisa mukana uno kugadzirisa kubata, mutsara, kana kumirira mimhanzi yenguva kuratidza zvigadzirwa zvitsva, masevhisi, kana zviziviso.
Wedzeredza Mhinduro neMitezo Yekumirira - Freshcaller inozoregedza vafonere vazive chinzvimbo chavo mumutsetse ivo vachimirira mukana wavo wekutaura nechikwata chako chekutsigira.
Bvisa Spam Kufona - Dzivirira otomatiki spam kufona uye patsanura vafonere vakadaro kubva kumatunhu kuyedza kubata bhizinesi rako.
Pindura Mafoni paSIP Phones - Gamuchira yako inopinda inofona yakananga pane ako maSIP zvishandiso uchiri kugona kushandisa iyo Freshcaller dhibhodhi yekuchinjisa, manotsi, nezvimwe.
Dzorera Mafoni neVoicebots - Ipa simba bhizinesi rako kuti upe zvaunotarisira chiitiko chinonakidza nemhinduro dzekukurumidza kune zvinovanetsa kunyangwe pasina mumiriri.
Shingairira Yako Kufona Kugovera - Fadza tarisiro yako nemhinduro dzinokurumidza nekufambisa mafoni kune vamiririri vekutengesa chaiko.
Tungamira Kunze Kwako - Kana iwe uine runyorwa rwevatungamiriri, unogona kuzviisa zvese kamwechete pachinzvimbo chekugadzira yega yega yekubatana zvakasiyana nekudaro kuchengetedza nguva yako.
Inobudirira Kufona Mutsetse Management - Seta mitsara yekufona kuti ugamuchire vafonere nenzira yakarongedzwa, govera yako yekuremerwa mutoro zvakaenzana, uye gadzira mitsara-based routing mitemo.
Automate Yako Kufona Kutenderera - Gadzira tsika tsika nzira zvichienderana nezvinowanikwa kubva kune vechitatu-bato masystem senge CRM yako kana Rubatsiro padhesiki.
Kuzivisa: Isu tiri mubatanidzwa we Nyowani nyowani uye vari kushandisa zvinongedzo zvavo.
Tags: kufona maskingnewcallerinbound yekutengesa mafonioutbound yekutengesa mafonipbxkure kutengesakure kutengesa kutengesasimba rekushanda riri kureyekutengesa kufona nharembozhakutengesa kufona kumakakutengesa kufonachaiyo foni systemvoicebot
Remove.bg: Bvisa Mifananidzo kumashure kubva kuHeadshots, Vanhu, uye Zvinhu zvisingaite neAI